Waayahaygii Xabsiga: Saldhigga Madaarka Illaa Sirdoonka Maroodijeex. Qaybta 3aad |
Waayahaygii Xabsiga: Saldhigga Madaarka Illaa Sirdoonka Maroodijeex. Qaybta 3aad
Cabbaar markii aan sirdoonka gobolka Maroodijeex ku xidhnaa ayaan weydiintan u gudbiyay “Ma helayaa mobile aan ehelka ku wargeliyo. Waxoogaa lacag ahna waan dalban lahaa?”. Kiisii ayuu Dugulo ii dhiibay. Halkaas waxa aan ku wacay dad ay ka mid yihiin: Md Cabdikariin Axmed Mooge, Wasiir ku-xigeenkii hore Qorsheynta Qaranka, Md Yuusuf Keyse Cabdillaahi Xoghayaha Warfaafinta UCID, walaalahay Khadar Maxamuud Gahayr iyo Sucaad Maxamuud Gahayr, Caaqil Cabdillaahi Mataan Aw Xasan, Nuuraddiin Xuseen Ismaaciil, Xaaji Cabdirisaaq Yuusuf Ismaaciil, Ismaaciil Maxamed Maxamuud, Cabdirisaaq Cabdillaahi Ismaaciil iyo laba hablood oo reer Somaliland ah.
Waa la ii soo diray waxoogaa aan casho iyo caweysba ka dhigto oo ZAAD ah. Waxa aan mahad-naq gaar ah gaadhsiinayaa Wasiir ku-xigeenka Kalluumaysiga oo ah xilkas aan yaraysan hawshii iyo xannibaaddii xaaraanta ahayd ee i saarnayd. Kolkii aan dantaydii qunsaday ayaan wacay Dhidar Mitid Ilyare oo taxaabid iyo tallaabinba masuul ka ahaa. “Halkee ayaad geli, waan soo baxayaa. Haddii aan markaas lagu kadin waad arki” ayaan ugu hanjabay inta uu dhigay taleefanka ayuu wargeliyay Mujrim Dhareerre Dhagarqabe.
Madaxii jeelka ayaa igu bilaabay “Ma telkaagii ayaa Dugulooy dadka laga caayayaa?” kolkuu yidhi intaas waxa aan ugu jawaabay“Ma aha Dugulo abti. Waa Siciid Kabadheere ninka aad la hadlaysaa”. Degdeg ayuu u dhigay.. Inta uu mar labaad isoo wacay ayuu ku tiraabay
“Dugulo iigu dhiib”.“Taasi maangal ma aha” waxan u raaciyay “Aniga ayaa saacaddan haysta ee iska dhig ama meel kale kala xidhiidh”. Shaw basaas kale ayuu wacay. Nin ordaya ayaa soo galay, waxa la iga qaaday taleefankii. Albaabkiina quful ayaa lagu rakibay. Si xeeladaysan ayaan markaa u dhigtay gogoshii.
Abbaaro 02:00dii duhurnimo ayuu ii yimi Cabdirisaaq Cabdillaahi Ismaaciil waxa aanu ku wada hadalnay sarbeeb. In galabta aan xorriyadda helayo ayuu ii sheegay, waxaanu tegay gurigii Taliyaha Sirdoonka Maroodijeex. Isaga oo hurda ayuu toosiyay kaddibna waxa ay yimaaddeen xaruntii sirdoonka Gobolka aniga oo gama’san. Wakhtiga ay isoo gaadheen waa illaa 05:30 galabnimo. Eedaanka salaadda gabal-dhaca ayaa dhawaa. Nin i guud taagnaa ayaa yidhi “toos, waxa yimi Muxsin”.
Waan soo baxay, waxanu ahayn laba nin oo fuqa taagaya. Sheekadan ayaa na dhex martay Taliyaha Sirdoonka Gobolka Maroodijeex, abtigay Muxsin Aw Cali Sheekh Jaamac:
• Abti ii warran?
• Waa nabade ma fiican tahay
• Sidee wax u dhaceen?
• Nin baanu is-feedhnay. Kaddibna idinka ayaa ila soo wareegay
• Inaad is-dejiso ayaa wanaagsan
• Hadday ka maarmi weydana difaac ayaa la galaa
• Immisadii ayaad dhalatay?
• Berigaa guuto SNM ah ayaan madax ka ahaa
• Waan ogahay in aad 1988kiiiyo 1994kiiba halgamaa ahayd. Mar aan meeshayda ku bannaysto ayaan u baahanahay.
• Waxba 1994kii lagama dheefin. Weliba waxa aan ka barakacay shan guri oo shacabka ah keligay. Guud ahaanna reer Sallaxley waxa ay ka yaaceen 500 guri.
• Kollay dagaal aan ujeeddo lahayn ayuu ahaa. Muxuu kii SNM u istaagi waayay?
• Nin dheer oo madaw ayaan ku moodayay
• Ma ihi kaas. Waad i aragtaa. Maxaa la igu haystaa?
• Waraaqo Banka Qoolcaday lagu diidayo ayaad daadisay baa la yidhi
• I tus, sida aan wax u qoro waa la yaqaan. Waan ka daw-baxayaa: email, taleefan iyo kombiyuutarna waad baadhi kartaan. Dooc iyo dareen midna kama ogi. Jiiddaa aad sheegaysana maalin aan geeddi kaga nimi Kaam Abokor iyo maalin aan Sallaxey gaadhaya ayaan tegayba.
• Hadda salaaddii ayaa dhaw saxeex warqaddan ku saabsan in aynu eeddaas bacdal-ciidka isaga nimaadno iyo nabadgelinta Maamulaha Madaarka
• Kaas ma ballan-qaado ee illaw. Ta kalena waa hagaag.
• Imaka afurkii ayaa dhaw’e waa inoo sidaas iyo wanaag.
• Waxba kama qabo.
• Mar qudha ma odhan “taliye, guddoomiye” keliya abti ayaan lahaa. Mid guulwade ah baa yidhi “taliye dheh”. Inta aan indhaha ku gubay ayuu gaabsaday. Sidaas ayaan ku soo baxay.
Intii aanay bisha Soon dhammaanin ayaan ogaaday halka lagu malluuqay iyo cidda qortay waraaqaha lagu diiddanaa Mashruuca Banka Qool-caday, waxaana ka dambeeyay niman la shaqeeya Sirdoonka Maroodijeex. Waxaanay ahayd eedayn ambad ah oo rag deyaysani dusha ii saari gaadheen. Inta xiisad la abuuray ayaa cid aan shaqo ku lahayn lagu hafrayaa.
Nasiib-darro markii ay Maamulaha Madaarka iyo Taliyaha Sirdoonka Marood-jeex isku tuurtuureen wareejinta ee aan muddo bil ah ka rabay sababta ay ii kala tirsadeen, hadalkuna dhaafi waayay “Iyaga ayaa ku doonayay” “Iyaguun baa nagu kaa wareejiyay” ayaan iska dhaafay ergadii ku maqnayd. Maalmo kaddib waxa aan taleefanka kula xidhiidhay Wasiirkii hore Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Maxamuud Xaashi Cabdi “Adeer, waan ka xumahay xadhigga” ayuu hadalka ku koobay.
22kii Ogos 2014ka ayaan Royal Hotel kula kulmay Wasiirkii Hore ee Madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali Xasan, waxaanu isugu nimi xaflad uu ururka Gaaroodi shahaado-sharaf guddoonsiinayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxaana u guddoomayay Wasiirkii Hore ee Wasaaradda Madaxtooyada. Kolkii madarka/shirka laga dareeray ayaan bariido kaddib uga warramay sida ay wax u dhaceen. Md Xirsi waxa uu igu igu yidhi “Siciid ma aan ogeyn. Waan ka xumahay xadhigga, waan baadhi doonnaa waxa sababay insha Allah”. “Hagaag wasiir” ayaan ku idhi, war dambena kama helin.
Kolkii aan oday, madax-dhaqameed, abti, masuul, ganasade, adeer, walaal, tol iyo cid i daw-bixisa ama labadaas nin soo geed-fadhiisisa waayay ayaan afkayga ku ciil-baxay. Halkaas ayaanay ku dhammaatay hawshaasi gu’gii 2014ka!